> Resource > Mac > Mac Mini Hard Drive Recovery Tutorial
Halkan saaka wixii aan la kulmeen, waayo, qaar ka mid ah sababaha waxaan formatted xijaab on my Mac Mini. Dhammaan xogta ku saabsan xijaab in la waayay. Laakiin hadda waxaan doonayaa inaan dib ugu faylasha qaar ka mid ah waxa ay ka hesho. Waxaan aaminsanahay in xogta aan weli ku jira drive Mac Mini adag. Qof fadlan i caawin kartaa?
Waad saxan tahay. Waxaad weli files yihiin aad drive Mac Mini adag, iyadoo aan loo eegayn aad Mac Mini waxaa burburtay ama formatted. Ka hor inta aan overwritten by xog cusub oo ku saabsan Mac Mini, si fudud iyaga oo aad soo celin karaa iyadoo la kaashanayo ah dhinac saddexaad Mac Mini utility kabashada drive adag.
Wondershare Data Recovery for Mac waa Mac Mini utility ah soo kabashada xogta drive adag oo awood leh oo awood u siiyaa in aad dib u soo ceshano qadar weyn oo ah noocyada file formatted, kharribeen, ama lumay Mac Mini drive adag, oo ay ku jiraan videos, document faylasha, sawirrada, files audio, emails, iwm Iyadoo this utility si sahlan loo isticmaalo iyo khatar la'aan, kaliya aad u baahan si ay u qabtaan qasabno yar oo sahlan si loo soo celiyo xogta laga Mac Mini drive adag.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery for Mac ka hoos ku qoran, ka dibna waxaad bilaabi kartaa Mac Mini kabashada xogta drive adag.
Kabsado Xogta laga Mac Mini Hard Drive in 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Haddii aad Mac Mini waa la dumiyey ama burburtay, waxaad u baahan tahay inaad qaadato oo ay gaari ku adag oo ku xirmaan computer kale Mac in la sameeyo dib u soo kabashada.
Tallaabada 1 Daahfurka Wondershare Data Recovery for Mac iyo hab kabashada xulo si ay u bilaabaan
Ka dib markii ay ku rakibidda oo bilaabeyna qalab aad Mac Mini, waxaa lagu siin doonaa iyada oo qaar ka mid ah hababka soo kaban sida "lumay Recovery File", "Recovery ah Barzakh," iyo "ceeriin Recovery". Waxaad ka arki kartaa si taxadar leh tilmaamaha ay ku bartaan sida ay u shaqeeyaan.
Halkan aynu kaliya dooro "lumay Recovery File" markii hore.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku adag drive in faylasha aad ayaa laga badiyay ka.
Tallaabada 2 Scan Mac Mini adag la wado in la raadiyo files lumay
Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan drive adag aad rabto in aad soo kabsado xogta ka oo guji "Scan" si ay u bilaabaan raadinaya files recoverable.
Fiiro gaar ah: Haddii xogta aad lumay, maxaa yeelay formatting, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Dhammaan files recoverable lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka dib markii iskaanka. Si aad u hubiso in faylasha aad la helay, waxaad ka arki kartaa magacyada asalka file furmo. Iyo sidoo kale in aad ku eegaan karo helay images.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in la garaaco on "Ladnaansho" button dooro meel aad Mac Mini sii files soo kabsaday.
Fadlan ha badbaadiyo soo kabsado xogta in ay xijaab asalka ah.